FANOHANANA NY EKIPAM-PIRENENA : Notoloran’ny Filoha Andry Rajoelina 1 tapitrisa ariary avy ny Barea U20
Noraisin’ny Filoham-pirenena, Andry Rajoelina tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra, omaly 26 Desambra 2019 ireo ekipam-pirenena malagasy, Barea U20 vehivavy izay nandrombaka medaly volamena nandritra ny « Tournoi UFFOI 2019 » farany teo. 27 décembre 2019
Voalohany teo amin’ny tantaran’i Madagasikara no nibatan’ny ekipam-pirenena vehivavy io amboara io.
Niarahaba manokana ireto mpilalao baolina kitra ireto ny Filoha Andry Rajoelina nandritra ny fihaonan’ny roa tonta. Nitondra avo ny voninahi-pirenena izy ireo ka notoloran’ny Filoha « fanomezana manokana » mitentina 1 tapitrisa ariary tsirairay avy. Notolorana loka mitovy amin’izay koa ireo mpikarakara ara-teknika nitoto nahafotsy sy nahandro nahamasaka ka nahazoana izao fandresena miezinezina izao. Nitondra ny teny fisaorana tamin’ny anaran’ny federasiona sy ny ekipa iray manontolo ny filohan’ny FMF Raoul Arizaka Rabekoto izay nankasitraka manokana ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ny fanohanany ny taranja baolina kitra malagasy sy ny fanatanjahantena amin’ny ankapobeny.
Raha tsiahivina, nandrombaka ny medaly volamena teo amin’ny Tournoi UFFOI 2019 ny ekipam-pirenena malagasy vehivavy latsaky ny 20 taona teo amin’ny Taranja Baolina kitra, Barea U20. Dimy (5) ireo ekipa nandray anjara tamin’izany, nahitana an’i La Réunion, Maurice, Mayottes, Rodrigues ary Madagasikara. Io vokatra io no nampiseho fa vonona tanteraka ny mpanao fanatanjahantena malagasy hiaro ny voninahi-pirenena ary mandray anjara feno amin’ny fanandratana ny hambom-pom-pirenena amin’ny alalan’ny fanatanjahantena, araka ny fanamby izay efa napetraky ny Filoha Andry Rajoelina.